SIR: Al- Shabaab oo ku biirtay Loolanka Sanaag kasocda, Somaliland-na garab siinaysa. – Puntlandtimes
SIR: Al- Shabaab oo ku biirtay Loolanka Sanaag kasocda, Somaliland-na garab siinaysa.
BADHAN(P-TIMES)- Maalmo markii lagu kala guuleystay xaaladda gobalka Sanaag, waxay bilowday Somaliland in ay dhaqaajiso kooxaha ka amarqaata ee ay xariirka leeyihiin kuna sugan buuraleyda GOLIS, gaar ahaana kooxda Shabaab, kuwaas oo hadda dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay buuraleyda gobalkaas.
Maleeshiyaad katirsan Al- Shabaab ayaa Khamiistii lasoo dhaafay lagu arkay agagaarka deegaanka AF Urur oo ay isku diyaarinayeen weerar culus oo ay ku qaadaan, balse ciidamada Ammaanka oo ogaaday awgeed ayay u hakiyeen weerarkooda.
Dhaqdhaqaaqyada Shabaab ay ku tageen deegaanka Af Urur ayaa la rumeysan yahay in ay qeyb ka tahay Somaliland, waxaana maleeshiyaadkaas hogaaminayay nin ka soo jeeda beesha Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo kamid ah horjoogayaasha kooxdaas.
Madaxtooyada Somaliland, waxay dhawaan u dirtay qoraal Hay’addaha caalamiga ah ay ku sheegayso in gobalka Sanaag ay joogaan maleeshiyaad katirsan Al- Shabaab oo ay wada qabsadeen Puntland, taas oo ah mid ay aad ula yaabeen beesha Caalamku.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa waxba kama jiraan kusifeeyey warka Muuse Biixi, isagoo sheegay in ay Somaliland tahay cidda kaalmeysata ee taageerta dhaqdhaqaaqyada xagjirka ah, gaar ahaana kuwa kusugan buuraleyda GOLIS.
Hadalka Madaxweyne kuxigeenka Puntland, waxaa xaqiiqo ka dhigay dhaqdhaqaaqyada cusub ee kooxaga xagjirka ah ay ka bilaabeen in ay weeraro ku qaadaan saldhigyada ciidan ee ay dawladda Puntland ku leedahay agagaas.
Siyaasiinta Beesha dagta gobalada Sanaag & Haylaan ayaa kulan ku leh degmada Badhan, kaas oo ay uga wada hadlayaan aayahooda, gaar ahaana sidii loola dagaalami lahaa cid kasta oo ka soo horjeeda ammaanka iyo kala dambeynta gobaladaas, waxaana muuqata in ay hadda dhinacyadaas isku duuban yihiin.
CaaLanku waa ogyahay in dagaalku reer halamash dhexdooda yahay ee sheeka kale keen
Habraha halamash leeya ayagaaba daacish iyo Alsheeydaan ah soo maahan? Hadeeysan wax ka dhaxeeyn maxaa isku soo aadiyaya markeey dagaa lamayaan? sheeko
Harti halamsh belo ma jidho
Warka ay somaliland u dirtay caalamka waa wax iska cad wixii uu ka digay ee uu besha caalamka gaadhsiiyeyna waataa maanta la arko ee ay soo galeen Af urur kolkaa waxa la sugayaa saxeex beesha caalamka horyaal oo la doonayo in ay gudaha u gasho somaliland iyo ciidamadeeda somajeestayaashu si ay gacan bira ugu soo qabtaan nabad diidka mar hadii puntland aan la isku halayn karin waxbana aanay ka qaban karin in ay nimanka nabadiidka meel ku tiiriyaan. Beesha caalamku waxa ay aad uga cadhootay sida ay beenta u sheegayaan madaxda puntiland ee ay u marin habaabinayaan nabadiidka dhexdooda jooga . Muuse aftaag saxeexa ayuu sugayaa uma socdo shacabka puntland inuu waxyeeleeyo balse waxa ay u socdaan in ay aminaga sugaan ooo ay gacanta ku soo dhigaan nimankaa markaa dadku haysdejiyaan wabkana waxan uga digaynaa in uu bulshada marin habaabiyo guul baan u rajaynayaa xooga geeska afrika ciidanka qaranka sl.